Isamsung iqala ukuvelisa ezayo iimodem ze5G | I-Androidsis
Isamsung iqala ukuvelisa iichipsets zayo ze5G
Isamsung sele ilungiselela i-5G. Namhlanje inguqulelo ye-5G yeGPS S10 yakho iyathengiswa eMzantsi Korea. Le nguqulo yefowuni isungulwe nge-Snapdragon 855. Nangona kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo iindaba zaqhekeka ezingqina ukuba kuyakubakho uhlobo lwesixhobo esisebenzisa iprosesa yohlobo lwaseKorea. Ukongeza, ngoku balungiselela ukuveliswa kweetshipsi zabo ezihambelana ne5G.
Uphawu lwaseKorea lunalo Sele zilungile ii-chipset zilungele le nkxaso kwi-5G. Ke zinokubandakanywa kwezinye zeefowuni ze-Samsung kwiinyanga ezizayo. Ngoku inkampani iqala ukuvelisa ngobuninzi bobathathu.
I-Exynos Modem 5100, i-Exynos RF 5500 kunye ne-Exynos SM 5800 Ngamagama ezi chipets zintathu zohlobo lweKorea. Zonke zinempawu ezifanayo zokunika le nkxaso kwi5G. Yintshukumo ebalulekileyo yophawu. Kuba bafuna ukulungela ukuthunyelwa kwe5G.
Kubonakala ngathi i-Samsung iza Sebenzisa ezi modem kwiimodeli ezahlukeneyo Uluhlu lwayo, hayi nje ukuphela kwayo okuphezulu. Nangona ngekhe sibone iimodeli ezihambelana ne-5G eziphakathi ukuya kuthi ga kunyaka olandelayo. Kodwa i-brand ifuna ukuba sele ilungiselelwe le meko.
Ayizukude unyaka olandelayo xa kumazwe amaninzi eYurophu qala ukuba ne-5G, ngovavanyo okanye ngokusebenza ngokupheleleyo. Ke iimveliso ze-Android zinexesha lokwazisa iifowuni ezixhasayo. Isamsung sele isungule eyokuqala, nangona isiphelo sayo silandelayo iya kuba nayo inkxaso enjalo.
Ke ngoko, siyayibona indlela iSamsung bathatha ukuthunyelwa kwe-5G njengethuba leefowuni zabo. Ke ngoku, ukuveliswa kwezi modem zintsha sele kuqalile. Nangona kungakhange kuthiwe ukuba zeziphi iifowuni zorhwebo eziya kuba zezokuqala ukuba nazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Isamsung iqala ukuvelisa iichipsets zayo ze5G
I-Motorola P40 Play, oku kuyakuba kuyilo lwefowuni entsha enexabiso eliphantsi yenkampani